I-DEERHUNTER: IPHUPHA ELIPHINDWE KABINI LOVAVANYO LWEALBHAMU YASENTWASAHLOBO - IINDABA
Iphupha eliphindwe kabini leNtwasahlobo
Le khasethi imiselweyo, ikhenkethi kuphela iziva ingenzekanga kodwa ineengcamango ezininzi. Kuvakala endaweni ethile phakathi kweedemo zomoya kunye nolwakhiwo lwe-lo-fi avant-garde.
Ukuba awuqondanga ukuba iDeerhunter inokukhutshwa ngokutsha, injalo loo nto. Ukulandelwa okufanelekileyo kwe-2015's vibrant Umda oPhelayo isasebenza, kodwa Iphupha eliphindwe kabini leNtwasahlobo iyafumaneka kwikhasethi, kwaye kunjalo. Akukho vinyl. Akukho zinkonzo zokusasaza. Hayi, ngokubonakala kwayo, nkqu nokuvuza kwedijithali. Eyona nto ibalulekileyo, iteyiphu yemizuzu engama-40 bekufanele ukuba iyathengiswa kulo lonke ukhenketho lwangoku lwebhendi, kodwa ithengisiwe ngobusuku bokuqala. Ekuphela kwendlela yokuva umculo yayikukulinda emgceni uthenge enye yeekopi ezingama-300 kumboniso wokuqala waseBrooklyn. Iziphumo, njenge-anachronistic kumxholo njengakwifomathi yayo, ifika kanye ngexesha elifanelekileyo.
I-bikini ibulala ii-singles
Ilapha kwaye emva koko ayikho. Iyancipha ngokunyini kwaye-ithiyori, kwihlabathi leeriphu zedijithali kunye nokwabelana ngefayile okungahambelaniyo-kufumaneke ngokungapheliyo kubo nabaphi na abaphulaphuli abanokuba nomdla. U-Frontman Bradford Cox uthe umculo ukhutshwe kwiteyiphu ngenxa yamaxesha amade ekhokelela kwivinyl edityaniswa nomkhukula womxholo osinciphisile isizathu sokunika umculo kwi-Intanethi. Wayezisola ngendlela ezikhawuleze ngayo iiteyiphu ezazithengisiwe kwaye wathi ngekhe aphawule ngezicwangciso zokucinezelwa. Ngenxa yokuba umculo apha (phantse) yonke imathiriyeli yantlandlolo erekhodwe nge-Deerhunter lineup (Cox, drummer Moses Archuleta, guitarist Lockett Pundt, bassist Josh McKay, kunye no-keyboardist uJavier Morales) kwindawo yabo yasekhaya eAtlanta, olu phumo luziva lukhulu Uninzi losapho lakwaDeerhunter lolunye ukhuphelo olungelulo olwe-albhamu, ukusuka kwi-John Peel irhafu kwiteyiphu eya kwigumbi lokulala ebhalwe mahala.
I-albhamu enesiphumo iba ngathi iyazenzekela kodwa ineengcamango ezininzi. Ikwayinto encinci ejikelezayo yasekhohlo: Iteyiphu izama ukuthanda izinto ezindala (iijams zekrautrock) kunye nezintsha (ihabhu). Ngaloo moya, Iphupha eliphindwe kabini leNtwasahlobo Kuyathandeka ukuba uhambo oluthandekayo luye kwi-avant-garde, umsebenzi omkhulu, omncinci ovela kwiqela elikhulu, eliphambili.
Icala A, elingenamagama, livakala ngokungathi yintwasahlobo njengoko kunokulindeleka kwiqela elikwaziyo ukujika Idiplo remix kwinto eyoyikisayo neyothusayo. Iintaka ezijijelweyo zivula i-Clorox Creek Chorus ngokukhawuleza zinike indlela yokuma iipateni zeDial Metal, i-latticework ye-woodwinds, izitshixo, kunye ne-clip-clop percussion ekhutshelwa kwimizuzu elishumi elinesibini elandelayo, njengeStereolab yokwakha iwotshi yegcisa laseAtlanta Isitudiyo sobugcisa esingasemva kwendlu kaLonnie Holley. Icala livala nge-Strang's Glacier, i-giddy reverie eyakhelwe ngeenxa zonke zepiyano bass amanqaku, ukubetha amacangci, kunye nokuncwina okukhoyo okuqhwithela njengesibonakaliso esothusayo esivela kwialbham yokuqaqamba kuka-2007, Iikhompyuter .
Icala B, elinamagama athile, kukucekeceke kancinci. Isixhobo somculo wepiyano esihle I-Primitive Baptists icwangcisa ingoma yokuqala ye-tepi enamazwi afanelekileyo, iDenim Opera, kwaye emva kokwakha okuninzi, kuyonwabisa ukuva umphambili uBradford Cox ebopha umhlangano ityala , okanye ucofe inqaku eliphezulu kwilizwi elikholwayo, ucula ingoma malunga nolwaphulo-mthetho nosindiso. I-track-lo-fi clatter ibingayi kuba yindawo kwindawo yediski ka-Deerhunter ka-2008 Ixesha elingaqhelekanga Cont. Ukumamela le ngoma, kunzima ukuxelela ukuba ulungise ubuso obunzulu okanye uqhume ukuhleka, kwaye uziva unenjongo.
Kanye West kunye nefantasy yam emnyama ejijekileyo
Emva kwezixhobo ezimbalwa ezibonisa ukubethwa kwentambo kuxhonywe kwi-amp amp kunye ne-marimba yokuntywila, uDeerhunter ugcina esona sityhilelo sinamandla kwisiphelo: ukuthembeka kuthathe umqambi uCharles Ives 'sparse 1919 wobugcisa obunobunono, kunye namazwi ngumbongi weQuaker UJohn Greenleaf Whittier. Ukuphela kwayo yonke le nto iyothusayo, ukuhamba ngesikhephe sikaWonka ingqokelela, ingoma ethi Ives ngokwakhe yagwetywa njengezandi ezimnandi kancinci njenge-amen, okanye ubuncinci obumnandi beBenadryl.
Isihloko sayo sinqwala zombini i-hermetic 1970 incwadi yimbongi uJohn Ashbery kunye nalawo amagama, ngo-1915 inkohliso ukupeyinta ngu-Italian surrealist uGiorgio de Chirico. Ezi ngxelo zilumkisa ngokufanelekileyo ukuba singena kwi-erudite, incoko engaqhelekanga: ixesha elimangalisayo eliqhubekayo kuba lidlulile phakathi kwamagcisa afana nenkcubeko yabantu. Kanye njengokuba kufanelekile, nangona kunjalo, kukuphinda kabini ukuzicingela, ethi iDeerhunter isebenze ngokufanelekileyo kulwakhiwo olunamacala amabini ekhasethi.
UCox uthe ukuza kukaDeerhunter, uCate Le Bon - ovelise ubude obugcweleyo uya kuthwala isihloko esisebenzayo Kutheni le nto ingekaFuneki yonke into? , eyathi, ngokumangalisayo ngokwaneleyo, ikwaligama lesinye sezincoko zokugqibela isithandi sobulumko esingumFrentshi uJean Baudrillard wabhala ngaphambi kokuba asweleke ngo-2007. Emva komfanekiso wonke, uBaudrillard wathi, kukho into eyanyamalalayo. Lowo ke ngumthombo wokutsala kwakhe. Iphupha eliphindwe kabini leNtwasahlobo yiteyiphu ye-boutique uninzi lwethu oluya kuhlala luhlangana njengaleyo kunye ne-zero, kwaye ukuya kuthi ga ngoku-nokuba kungade kube yingxelo yeDeerhunter elandelayo, okanye ngaphaya koko-inomdla. I-Ephemeral nangona isenokuba njalo, ikwayimpumelelo ukubhiyozela. Nokuba, okanye ngakumbi, njengoko uBaudrillard wayenayo, kufuneka sibuze: Ngaba, phofu, yinyani esiyikhonzayo, okanye ukunyamalala kwayo?
UTom encinci ubutyebi baseMelika
inkwenkwezi izalwa yigrama
Irediyo yomntwana iingoma
lala uphononongo lwesayensi
dj shadow umatshini wabucala